Weerar ka dhacay Muqdisho & khasaaro ka dhashay | dayniiile.com
Home WARKII Weerar ka dhacay Muqdisho & khasaaro ka dhashay
Weerar ka dhacay Muqdisho & khasaaro ka dhashay
Rag hubaysan ayaa xalay waxaa weerar ku bilowday bambo gacmeed ay ku qaadeen Bar-koontorool oo Ciidamo katirsan Booliska Soomaaliya ku leeyihiin Agagaarka masaajidka Turkiga ee kutaalla Wadada u dhaxeysa Isgosyka Fagax & Xaafadda Jamhuuriyo ee degmada Kaaraan.
Dagaal kooban oo ka dhacay Goobta weerarka lagu qaaday ayaa waxaa ku dhintay sida la xaqiijiyay Wiil Dhalinyaro ah oo wadada marayay, kaas oo lagu KlMagacaabi jiray Sakariye Cabdullaahi Timacadde, halka uu jira laba kale oo dhaawac ah kana dhashay weerarka.
Dadka degaanka ayaa ku waramay in Ciidamada Booliska ay Barta-koonyorool isaga tageen intii uu socday dagaalka walow markii dambe ay dib ugu soo laabteen.
Warar qaar ayaa sheegaya in raga weerarka soo qàaday ay ahaayeen ciidan millatari ah oo iyaga oo meesha maraya hubna aan wadan ay markii hore qash qashaadeen kuwa booliska sidaasna ay kusoo weerareen .
Dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale loo weeraray Barta Koontorool ee Ciidamada Booliska kuleeyihiin Agagaarka Masaajidka Turkiga, waxaana inta badan ku waxyeelooba dad Shacab ah.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka oo kulan la yeeshay Safiirka Jaamacada carabta
Next articleXiisad u dhaxeeysa Xukuumadda & mucaaradka Somaliland oo ka taagan Hargeysa
The UN is expanding its search for illegal armaments on the...
Ethobia waa Ethobia
After an Indonesian ferry sank, 31 people were rescued, but 11...
Shirkad lacag ku bixineysa in aad u ogolaato in baranbaro ay...